Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Gooba Ganacsi Boobay. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Gooba Ganacsi Boobay.
calamada August 7, 2016 1 min read
Habeenkii xalay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka waxey boobeen gooba ganacsi oo ku yaala xaafada Dabaqeynka ee degmada Dharkenley magaalada Muqdisho.
Maleeshiyaatka dowlada federaalka waxey goobahaasi ganacsi ka qaateen hanti u badan lacag isugu jirta Shilin Somali iyo doolar’iyadoona maleeshiyaatka dowlada ay marmarsiyo ka dhigteen in goobahaasi ganacsi ay ku yaalaan gooba waddo ah.
Qaar ka mid ah ganacsatada xaafada Dabaqeynka ee degmada Dharkenley oo la hadlay warbaahinta waxey sheegeen in danta kaliya maleeshiyaatka Murtadiinta ay lahaayeen ay tahay iney jaabka ka buuxsadaan lacagaha ku jira goobahaasi ganacsi sidaasna ay sameyeen oo gabi ahaan ay qaateen lacagihii yaalay goobahaasi ganacsi.
Maleeshiyaatka Dowlada Ridada federaalka ayaa caan ku ah iney biil ka dhigtaan lacagaha baada ah ee ay ka qaataan isbaarooyinka iyo midda boobka iyo dhaca ah ee ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka iyo goobaha ganacsiga.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 04-11-1437 Hijri.
Next: Saraakiil Itoobiyaan Iyo Konfur Afrikan Gobalka Baay Lagu Dilay.